Nzira yekugadzira sei Amazon yako tracking system?
Kuva nekapamhi yakagadziriswa kuAmazon ndiyo mukana wakanaka kwazvo wekusimudzira kutengesa kwako sevamwe vanogona kuti vatengi vawane zvigadzirwa zvako pavanotsvaga nzvimbo. Kuti uve akakunda kubudirira muAmazon, unoda kuramba uchitsvaga nzvimbo dzako uye uzive chaizvo kuti Amazon inoshandiswa sei negorgorithm.
Pane 21 Amazon product ranking zvinhu. Zvose izvi zvinogona kugoverwa mukutendeuka, kukosha, uye kugutsikana kwevanhu kugadzirisa maitiro. Kushandura kuwanda kwezvinhu zvinosanganisira kutengesa kwekutengeserana, kuongorora kwevatengi, kupindura mibvunzo, ukuru hwemufananidzo uye unhu, mutengo, mubereki-vana michina, nguva iri papeji, kuwedzera kwezinga uye chigadzirwa chechikwata chakakwana - картинки з днем народженя.
Ngatitaurirei zvimwe zvezvinonyanya kukosha maAmerica kutengesa zvinhu zvaunoda kutarisa kuti uwedzere kutengesa kwako:
Kutengeswa kwepamusoro ndiyo inonyanya kukoshesa chinzvimbo chinokanganisa chigadzirwa chako pane Amazon SERP. Zvimwe kutengesa zvinotungamirira kumazinga akakwirira, uye pashure pacho kuwedzera kwepamusoro kunotungamirira kune kutengesa kumwe. Amazon sales rank or in other words Amazon bestseller rank is how well a specific product is selling compared to other products in the same category. Vatengesi vanoteerera iyi metric kuti vaongorore kuti nokukurumidza zvishandiso zvavo zvinogona kutengeswa sei panzvimbo iyi yekutengesa. Iyi nhare inogona kuwanikwa mune chikamu chezvakagadzirwa nemichero maAmerica akawanda makhizha mapeji.
Rimwe shanduro yeAmerica inofanira kutorwa muchengeti wezvokudya. Zvose mbiri uye huwandu hwavo hunotorwa neAngesi kuti vaone chigadzirwa chakakosha. Izvo zvinyorwa zvinowanikwa iwe, iyo yakakwirira iwe uchatonga pa Amazon tsvaga tsvakurudzo peji uye pashure t21 Amazon product yakasarudzwa zvinowedzera zvingave nevatengi iwe uchanakidza.
Nokupindura mibvunzo yevashandi vose, unoratidza Amazon mafungiro ako kune iri pepanhau kunyanya, uye kune bhizinesi rako rose. Uyezve, inoita kuti vatengi vako vave vakavimbika kune cheki yako. Mibvunzo inopindurwa yakanyorwa pane TOP peji yezvibereko uye inotora chikamu chinokosha mukushandurwa.
Ukuru hwemifananidzo uye hutano
Kuti uwane kambani yekugadzirisa, iwe unofanirwa kutevedzera mazano emufananidzo weAmazon. Iwe unofanirwa kuisa mararamiro chete uye kurarama mafirimu emitambo yako kudzivisa kuisa mifananidzo nemifananidzo kubva kuGoogle. Iwe unofanirwa kushandisa zvifananidzo zvepamusoro zvehuwandu hwechiuru che1000 Х 1,000 pixels. Uyezve, unofanirwa kupa vatengi vako mukana wekutsvaira mifananidzo yako.
Unofanirwa kuva nemakwikwi pamakiti ako kuti uwedzere kutengesa kwako uye kukoshesa vamwe vanogona kutenga vatengi. Uyezve, iyo inokosha kutenga Bhokisi chimwe chinhu. Kana iwe usingakwanisi kupa vashandi vako vangave nemutengo unobatsira, iwe unogona kunge uchivapa nekutumira pasina.
Nguva iri papeji uye bounce rate
Amazon ranking system yakafanana neGoogle imwe. Amazon bots inowedzerawo kutarisa kwemareji yenguva iyo munhu anoshandisa iwe paunonyorwa uye ona chekuwedzera kwekutsvaga kwepaji rako kuti uone nzvimbo yezvigadzirwa zvako.
Product listing kukwana
Zvawakagadzirwa mazita zvinofanira kunge zvakazara zvakakwana kuti zvive zvakakwirira pane peji yemhinduro. Ndicho chikonzero iwe unofanidza kuedza kupedza imwe neimwe munda kuti upe vashandi vako vanogona nekanakisisa yekutsvaga chiitiko.